Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bedesho shaqooyinka, aado kulliyad, aad ku hesho dallacsiin shaqo, ama aad kaliya kor u qaaddo ciyaarta xirfaddaada software-ka guud ahaan. Waxaan haynaa qalab waxbarasho oo cusub iyo iskaashiyo bulsho si aan kaaga caawino inaad gaarto yoolalkaaga.
Haddii aad xiiseyneyso inaad beddesho shaqooyinka laakiin aadan hubin waxa ku habboon noqon kara, isku day Profiler Agile Work si aad u sahamiso xulashooyin wanaagsan oo ku saleysan xirfadahaaga jira.
Waa kuwan qaar ka mid ah qiimeynta xirfadaha farsamada heerka dhexe. Xullo mid aad kubaraneyso waxa aad horey u taqaanay ka dibna sahamiso koorsooyinka si aad u barato una barato xirfado cusub.
Raadi koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah si aad wax badan ubarato oo aad ugu tababarto xirfadahaaga heerka dhexe ee farsamada ah. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinkayaga.
Raadi kumanaan koorsooyin bilaash ah oo bilaash ah. Koorsooyinka qaar waxaa qaabeeyey macallimiin ka tirsan jaamacadaha ugu sarreeya sida MIT, Harvard, iyo inbadan. Waad dooran kartaa koorsooyin iskood u socda ama waxaad ku biiri kartaa fasalka khadka tooska ah ee soo socda si aad si wadajir ah wax ula barato dadka kale.
P2PU ama Peer 2 Peer University waa hay'ad samafal caalami ah oo dhiirrigelisa waxbarashada bilaashka ah. Iyada oo loo marayo kooxo waxbarasho oo yar yar oo la yiraahdo wareegyada barashada, waxaad ku lug yeelan kartaa waxbarashada tooska ah ee khadka tooska ah adiga oo saaxiibo ka samaynaya adduunka oo dhan.